Starbucks Coupon Fraud: Waa maxay sababta aan loo barcode? | Martech Zone
Starbucks Coupon Fraud: Waa maxay sababta aan loo barcode?
Khamiis, Agoosto 31, 2006 Khamiis, Agoosto 31, 2006 Douglas Karr
Set blog wuxuu hayaa qoraal ku saabsan kuufanka sikuufka xun loo maareeyay ee Starbucks. Marka la fiiriyo cabirka Starbuck, ma fahmin sababta aysan ugu soo darin istaraatiijiyad kuuboon ah barcoding. Kani waa tiknoolajiyad fudud oo jaban… waxay kaliya u baahan tahay in lagu hubiyo kombiyuutarka Barta Adeegga.
Sideed tan ku samayn kartaa? Inta badan iibiyeyaasha iibiyeyaasha softiweerka suuqgeynta waxay u oggolaadaan Beddelka Xarkaha (haddii aysan sidaas yeelin, u dhaqaaqo Xaqiiqda). Taasi waxay ka dhigan tahay inaad si fudud ugu dhaafi karto xarig dariiqa sawirka. Xadhigga la soo dhaafay xilligii e-maylku furmay runti wuxuu dhisaa barcode si firfircoon, markaa Starbucks wuxuu si fudud u qarin karaa nooc ka mid ah lambarka tigidhada - oo u gaar ah macmiilka - oo u soo saara sida barcode.
Markii la soo furtay, qasnajiga ayaa baari kara emaylka oo leh barcode-ka dushiisa. Qiimaha waxaa lagu eegay nidaamka dhexdiisa ka dibna waxaa laga hubinayaa sax ahaanta iyo madax furashada. Intaas waxaa sii dheer, furashada kuubanka waxaa dib loogu diiwaangelin karaa cinwaanka Emailka dhabta ah - iyadoo la siinayo Suuqa waxoogaa macluumaad qaali ah oo ku saabsan cidda iibisay kuubanka, muddada ay qaadatay, halka ay kaga soo furteen, iwm. Tani waa xog awood badan! Xaqiiqdii macluumaadka noqon doona kheyraad aad u weyn wadada!
Iyadoo qaar ka baxsan tiknoolajiyada shelf iyo qorshe fudud, Starbucks naftooda ayay ku badbaadin lahaayeen ceebta.
Cabsidu istiraatiijiyad ma aha
Blogs & Blossoms: Abuurka, Cawska, Dhirta iyo Koritaanka
Agoosto 31, 2006 saacaddu markay ahayd 8:55 PM
Fikirkaagu waa heer sare. Waxaan la yaabanahay waxa ay sameynayaan ragga ITbu ee Starbuck?